Sony RX1R, anyị nwalere igwefoto igwefoto a na igwe ihe mmetụta zuru ezu | Akụkọ akụrụngwa
Sony RX1R, anyị nwalere igwefoto igwefoto a na ihe mmetụta sensọ zuru ezu
Nacho Cuesta | | Foto
La Igwefoto Sony RX1R Ọ bụ ihe ịtụnanya dị na teknụzụ n'ime mpaghara foto. N'ime igwefoto kọmpat, ụlọ ọrụ ahụ enweela ike itinye ihe mmetụta zuru oke na Carl Zeiss optics maka ndị chọrọ inweta ọkwa kachasị elu na foto ha.
Tupu ịbanye na snapshots nke Sony RX1R nwere ike ịnwe, ka anyị nyochaa ngwa ngwa nke ya niile. nkọwa ịmatakwu ihe anyị ga-achọta:
24,3 megapixel full etiti ihe mmetụta
Carl Zeiss Sonnar T 35mm f / 2.0 anya anaghị agbanwe agbanwe
Oke ISO: 25.00
3 inch ihuenyo
Ndekọ vidiyo HD zuru ezu ruo 50fps
Arọ: gram 482
Nkeji: 113,3 x 65,4 x 69,6 mm
Dịka i si hụ, ọ naghị adaba na nkọwapụta agbanyeghị ị na-atụ uche ụfọdụ ihe dị ka ọnụnọ nke onye na-ekiri, ihe nwere ike idozi site na ịzụrụ ya iche na itinye ya na akpụkpọ ụkwụ nke ngwa ndị ọzọ nwekwara ike jikọọ.
Na ọkwa mara mma, Sony RX1R kwadoro ahịrị dị mfe ma mara mma, na-eme ka o siri ike ịhụ igwefoto n'etiti ndị mmadụ belụsọ mgbanaka oroma nke na-enye oghere Carl Zeiss. Sony ejirila ihe ndị dị ka magnesium maka imepụta ikpe ahụ n'ihi na ike igwefoto dị egwu, ihe a na-enwe ekele maka ya ozugbo anyị were ya na nke mbụ.
N'ihe banyere ergonomics, ndị ọrụ nwere nnukwu aka (dị ka m si kwuo) nwere mmetụta na igwefoto nwere ike ịgbanahụ anyị mana ọ bụ ihe ịmegharị iji kpochapụ echiche ụgha a. Mgbe oge a gasịrị, anyị ga-achọpụta na ihe niile ị na-eme nke na-enye ohere ịchịkwa nhọrọ dị iche iche nke igwefoto dị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, na-ekwe ịgbanwe ntọala na sekọnd na-enweghị na-ekwenyere na mgbagwoju menu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ogo onyonyo, ọ bụ ebe a na Sony RX1R karịrị ma weta agba nke ọtụtụ igwefoto Site na ahịa. Sony nke ahọpụtara ihe mmetụta sensọ na ngwa anya na-enye nsonaazụ ọma na ọnọdụ niile. Nkọ dị oke kachasị na ogo nke nkọwa dị oke elu, na-enye ohere iji nweta foto na-adọta ọtụtụ elebara anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nnukwu ma ọ bụ eserese nke mmetụta bokeh dị ugbu a.
Ihe ọzọ ịkọwa banyere Sony RX1R bụ na ọ dị iche na RX1 na nke ahụ Sony agbahapụla ngwa anya obere-pass iyo (OLPF) iji mekwuo nkọ ma jiri ohere a zuru ezu.
N'ihe banyere foto abalị, ihe mmetụta na-egosi anyị ike ya niile na na-enye ohere ịrụ ọrụ na ISOS dị elu na-enweghị nghọta mkpọtụ. A ga-amanye ụkpụrụ dịkarịsịrị elu ka àgwà onyonyo wee taa ahụhụ, mana n'ozuzu, arụmọrụ na ngalaba a dị oke mma. Ekwesiri ikwuputa na ihe mmetụta nke na-etinye Sony RX1R bụ otu ihe anyị hụrụ na Sony A99 natara ụdị nyocha dị mma.
Ihuenyo atọ nke anụ ọhịa ahụ na Sony RX1R dị nkọ ma jiri ya Tekinoloji Triluminos, nke na-eme ka ikiri ihe osise na ya bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Obu ihe kwesiri inwe ihe nlere anya nke igwefoto a na igwefoto dika nke a, na onodu nke ihe nlere anya gha eme ka otutu oru kariri ya.
O doro anya na Sony RX1R bụ igwefoto na-adọrọ adọrọ ma nwee ike ịnweta foto ọkachamara, ee, ọnụahịa ya 3.099 euro ga-abụ ihe mgbochi kachasị iji jide ya.
Njikọ - Sony RX1R
Osisi foto nke Sony RX1R:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Sony RX1R, anyị nwalere igwefoto igwefoto a na ihe mmetụta sensọ zuru ezu
Nyocha nke Metal Gear Solid V: Zeroes Ground